Momba anay - Nanjing Zhitian Mechanical And Electrical Co., Ltd.
NANJING ZHITIAN dia manokana amin'ny famokarana faritra fanoloana kambana extruder kambana. Ka efa 20 taona mahery ny zavatra niainany. Manamboatra boaty, barika ary singa visy amin'ny extruder visy kambana. Manome anao ny serivisy fanamboarana ho an'ny boaty sy barika koa izahay.
Ny orinasako miaraka amina hery ara-teknika matanjaka, fitaovana fanodinana tena tsara, teknolojia famokarana mandroso, rafitra fanaraha-maso henjana ary serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra, derain'ny mpanjifa. Hatramin'ny nahatonga ny vokatra amn'ny orinasako dia fampiharana matotra ao amin'ny Leistritz, Coperion, Berstorff, JSW, Toshiba, Jwell, Steer ary marika malaza hafa.
NANJING ZHITIAN dia naorina tamin'ny 2006. Tamin'izany fotoana izany ny faritra atrikasa dia manodidina ny 1000m2, Mpiasa dimy monja, Izany teo alohan'ny orinasa vahiny, ny vokatra rehetra dia natao ho an'ny tsena anatiny.
Tamin'ny 2014, nohalalaka ho 5000m ny faritra atrikasa2, Niakatra ho 50 ny isan'ny mpiasa, nanangana ekipa R&D sy ekipa Marketing izahay, namolavola ny orinasa manerantany. Nandritra ity taona ity, mihamaro hatrany ny mpanjifa vaovao mifandraika aminay, mbola manampy sy manohana mpanjifa vaovao hatrany hatrany izahay hiditra amin'ny famolavolana. sehatry ny vokatra.
Tamin'ny taona 2017, nanampy fitaovana fanodinana izahay, toy ny milina CNC 4, milina fandavahana lavaka lalina 2, 1 detector telo-habe 1 ary toy izany hatrany.
Tamin'ny taona 2018, ny faritra atrikasa dia nohalehibeazina ho 10000m2, ny tranon'ny birao dia 700m2, ny isan'ny mpiasa dia nitombo hatramin'ny 90. Nampitombo koa ny ekipa mpivarotra ho an'ny olona 6 miaraka amin'ny fivoriana isan-kerinandro, mba hahatratrarana ny habetsaky ny filaharana ary hampitombo ny haavon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsirairay . Fiomanana mahomby amin'ny dingana fampandrosoana manaraka ity.
Tamin'ny 2019 Mey dia nandray anjara tamin'ny fampiratiana CHINAPLAS Guangzhou tamin'ny fotoana 33 izahay mba hanaovana dingana amin'ny sehatry ny indostria matihanina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. antsika.
ZT rehetra dia mitandrina hatrany amin'ny dingana rehetra amin'ny antsipiriany, manantena ny ho avy hiaraka hiaraka aminao izahay!